Izinhlelo zokusebenza ezinikwa amandla ukufunwa kwesixuku
Lolu uhlu lwezinhlelo zokusebenza ezabelana ngomqondo ofanayo ojwayelekile, wokufaka okuthunyelwe komsebenzisi, nokuxhumana komphakathi.
Kube khona ubufakazi obuncane bemibono mayelana nenethiwekhi yokuxhumana nabantu egxile ekukhuleni nasekushintshaneni ngemifino. Kepha akukho okubi okuvelile. Kunengqondo kuphela ezingeni le-amateur, ngasikhathi sinye ingasuka kuphela ezindaweni ezinabantu abaningi abahlaza okotshani, njengokuthi inethiwekhi ingavela; Abalimi nabo badinga ukusungula iwebhu ethembekile, uma kungenjalo akukho okwenziwayo okungenzeka.
Izindawo zokubona udoti
Linganisela ukuthi indawo ethile igcwele kangakanani udoti. Umsebenzisi angathumela izithombe ezimakiwe ze-geo ezibekwe zigcwele udoti, zinikeze isilinganiso sezinkanyezi ezi-3 mayelana nokuthi kubi kangakanani. Lokhu kungasiza omasipala ukulandelela isimo semvelo sezindawo zabo, kepha kushoda ngezikhuthazo.
Kuyafana nezindawo zokubona udoti, kepha izimbobo zomgwaqo. Lokhu kungathuthukiswa ngokusebenzisa izinzwa ze-Smartphones, ukukhomba ukukhomba ekuhambeni okujwayelekile okungazelelwelokho akufanele kwenzeke lapho usendleleni.
Inani labantu, njengoba kubonakala ngeso lomuntu. Ilusizo uma ufuna ukulandelela ukuthi izikhala eziminyene njengamabhishi noma amapaki zinjani, ukuze ukwazi ukukhetha ukuya ezindaweni ezingaminyene kakhulu.
I-pseudo critical / satirical webhusayithi / i-database / isichazamazwi izinto zazichazwa ngezindlela ezahlukahlukene, njengoba zazizobonwa ubuntu / umlingiswa othile ohlukile.